Cali khaliif Galeyr oo geeriyooday. – Shabakadda Amiirnuur
Cali khaliif Galeyr oo geeriyooday.
October 8, 2020 2:31 pm by admin Views: 72
Cali Khaliif Galeyr oo ahaa siyaasi Caan ah xilal kala duwan soo qabtay ayaa Maanta ku geeriyooday Magaalada Jig jigo o ka mid ah Dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya haysato.
Cali ayaa la sheegay in uu in yar xanuusanaa kadibma Maamulka Itoobiya ka dhisatay dhulka Sooamalida ee ay haysato ayaa shaaciyay geeridiisa.
Siyaasigaan a 78 jir ahaa ayaa ku dhashay Gobalka Sool gaar ahaan Laascaanood wuxuuna daruusta Maadigaku qaatay gudaha iyo dibadda intaba asigoo jaamacado iyo iskuulaad kala duwan shahaadooyinka qaatay.
Cali Khaliif ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay Dowladdii kacaanka ee Maxamed Siyaasad Barre Madaxweynaha ka ahaa, kadibna dowlad ku Meel gaar ah oo sanadkii labada kun Soomaaliya loogu dhisay Dalka Jabuuti ayaa looga dhigay Ra’iisalwasaare.
Cali waxa uu sanadkii 2012 xildhibaan ka noqday dowladda federaalka ah 2014-kina waxa uu madaxweyne ka noqday Maamul la yiraahdo Khaatumo State oo laga dhisay Sool, Sanaag iyo Cayn.
Nooma kala cadda haddii siyaasigaanu xanuun u dhintay iyo haddii Itoobiya sumeysay ama si qarsoodi ah dishay.
Waxaa jira dad hore oo Dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya gumeysato ku geeriyooday kuwaasoo loo maleynayo in Itoobiya si xeeleydsan u dishay waxaana ka mid ahaa wariye Axmed Xasan Cawke iyo Abwaan sangub.